Science & Technology Archives - Media Nepal
January 21, 2018	Comments Off on फेसबुकले ल्यायो यस्तो नयाँ नियम
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अनेकथरी समाचार र सामग्रीहरु पोस्ट हुन थालेपछि विश्वसनीय समाचारलाई मात्रै प्रवर्द्धन (बुस्ट) गर्ने फेसबुकले नयाँ नियम ल्याउने भएको छ। फेसबुकका संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकुरबर्गका अनुसार अबदेखि न्यूज फिडमा पूर्ण विश्वसनीय समाचार स्रोतलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन्। ‘जुन भरोसायोग्य छ त्यो प्रकाशनलाई प्रवर्द्धन गर्नेछौं। जो प्रकाशनमाथि उच्च रुपमा समुदायको भरोसा छैन् त्यसमा कमी आउनेछ,’ उनले …
यो हो संसारकै सबैभन्दा ठूलो क्यामेरा, जसको अगाडि ट्रक पनि कमिला जस्तो देखिने
January 21, 2018	Comments Off on यो हो संसारकै सबैभन्दा ठूलो क्यामेरा, जसको अगाडि ट्रक पनि कमिला जस्तो देखिने
दक्षिण अमेरिकी देश चिलीमा संसारकै ठूलो क्यामेरा निर्माण हुँदैछ । यो भिमकाय क्यामेराको अगाडि ट्रक, क्रेनहरु त कमिलाभन्दा पनि साना देखिन्छन् । यो क्यामेरा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विशेष टेलिस्कोप मानिएको छ । जसले अन्तरिक्षमा पनि दूर दराजको तस्बिर खिच्ने क्षमता राख्छ । सन् २०१५ वाट यो क्यामेराको निर्माण थालिएको हो । सन् २०२२ मा यो पूर्ण रुपले निर्माण भइसक्नेछ । …
January 21, 2018	Comments Off on मोबाइलको प्रयोग धेरै नगनुहोस्, पाइन्टको खल्तीमा पनि सकेसम्म नराख्नुस ! यस्ता छन् कारणहरु
यस्तो समय आइसक्यो कि अहिलेको परिबेशमा हामी मोबाइल बिनाको जिबन कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ । दैनिक जीबनमा पानीको जति मोबाइलको आवश्यक भैरहेको छ, आजभोलि मोबाइल भएन भने मानिसलाई एक सेकेन्ड पनि बिताउन गार्हो हुन्छ । तर त्यहि मोबाइलको अत्यधिक प्रयोगले हामीलाई धेरै नै हानी पुर्याइरहेको हुन्छ । के असर गर्छ त, जान्नुहोस् : – गर्भवती हुँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगर्नुस् …
January 18, 2018	Comments Off on एउटा मोबाइलको फोन नम्बर अर्कोमा सार्नुपर्‍यो भने यी पाँच तरिका प्रयोग गर्नुहोस
एउटा मोबाइलमा भएको फोन नम्बर अर्कोमा सार्नुपर्ने धेरैलाई परिरहेको हुन्छ । प्रायः नयाँ मोबाइल किन्दा पुरानो मोबाइलको नम्बर सार्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा एक–एक नम्बर गर्दै फेरि टाइप गर्नुपर्ने झन्झट नै धेरैजसोले स्विकारेको पाइन्छ । यो निकै झूर तरिका हो । हजारौं नम्बर यसरी एउटा मोबाइलबाट अर्कोमा सार्न कम्ता मुस्किल पर्दैन । तर, एउटा मोबाइलमा राखिएका नम्बर तुरुन्तै अर्कोमा पठाउन …
January 8, 2018	Comments Off on वाइफाई सिग्नल कमजोर (स्लोव) भएर हैरान हुनु भएको छ यसो गर्नुहोस छिटो चल्छ
इन्टरनेट प्रयोग गर्दा अधिकांशले भोग्नुपर्ने समस्या हो– वाइफाई सिग्नल कमजोर । एउटै घरमा कुनै कोठामा सिग्नल राम्रो देखाउँछ भने अर्को कोठामा कमजोर हुन्छ । त्यस्तै, एकैछिनमा सिग्नल देखाउने र फेरि हराउने समस्या पनि हुन्छ । किन हुन्छ त यस्तो समस्या ? घरमा वाइफाईको सिग्नल कमजोर देखाउनुका कारण तथा त्यसका समाधानबारे डिआइटी सोलुसनका प्रशिक्षक सुदीप घिमिरेको सुझाब यस्तो छः राउटरलाई घरको …
January 7, 2018	Comments Off on अर्को वैज्ञानिक चमत्कार, विश्व तरङगित (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
केही दिनअघि मात्र चीनले विश्वलाई नै चकित पार्दै सोलार सडक बनाएर एउटा असम्भव प्राय विकाशको नमुना संसार सामु प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस्तै दिमाग नै हाल्लाउने खालको अर्को नयाँ अविष्कारले यति बेला विश्वलाई अचम्मित तुल्याएको छ । विज्ञानको चमत्कार बढिरहेका बेला जापानले फेरी यस्तै उदाहरण पेश गरेको छ । अब कुरा गरौ जापानले गरेको त्यो अविष्कारको बारेमा । यो नया …
January 5, 2018	Comments Off on अमेरिकाको निद्रा हराईदिने रूसको यो जहाज, हेर्नुस के के गर्न सक्छ यो जहाजले
सैन्य शक्तिमा अमेरिका र चीनलाई कडा चुनौती दिएको रुसले आधुनिक हतियार र शत्रुमाथि निगरानी राख्ने शक्तिशाली उपग्रहहरू व्यापक निर्माण गरेको छ । रुसको सैन्य बलमा अब एउटा अर्को जासूसी जहाज पनि जोडिएको छ । त्यसको नाम यन्तार हो । रुसी जलसेनासँग जासूसी जहाज यसअघि पनि थिए तर यन्तार फरक र शक्तिशाली छ । रिमोटबाट चल्ने अन्डरवाटर भेहिकलको श्रेणीमा पर्ने यन्तार …